Warbixin: Denmark oo ajaanibta iska saareysa | Somaliska
Warbixin: Denmark oo ajaanibta iska saareysa
Dalka dariska Sweden la ah ee Denmark ayaa waqtiyadaan dambe noqday mid ay la wareegeen cunsuriyiin iyagoo siyaasadii soo galootiga ee dalkaas ka dhigay mida ugu adag Yurub. Denmark ayay adagtahay in magangalyo laga helo iyagoo hada bilaabay sidii ay dalka ugu saari lahaayeen soo galootiga hada jooga.
Mashruuc cusub oo ay soo saartay dowlada ayaa lagu soo bandhigay in abaalmarin lacageed la siin doono Kamuunada dalka ka saara soo galootiga. Kamuunkii ku guuleysta in ay qof soo galooti ah dalkiisa ku celiyaan ayaa la siin doonaa 30,000kr qofkiiba. Arintaan ayaa la cambaareeyay oo lagu sheegay in ay ka soo horjeedo qaanuunka caalamiga ah.
Dadka ku nool Sweden ayaa dareemi kara saameynta ay arintaan ku yeelan karto soo galootiga Denmark, Kamuunada denmark ayaa sida Sweden oo kale ah kuwa bixiya adeegyada bulshada. Kamuunkii doonaya in ay lacagtaas abaalmarinta ah qaataan ayaa sameyn kara in ay nolosha ku adkeeyaan dadka soo galootiga ah ee ku nool magaaladooda.
Denmark ayaa hada waxaa ka diga siyaasiyiinta Sweden in aysan raacin wadada ay raaceen Denmark, oo xitaa joojisay in dadka Danishka ah iyo soo galootiga ay isguursadaan. Xisbiga Cunsuriga ah ee Dansk Folkeparti oo u dhigma Sverige Demokraterna ayaa Denmark ka ah kan sadexaad ee ugu weyn. Xitaa xisbiyada kale ee Denmark ayaa siyaasadoodii ka dhigay mid ku saleysan cunsuriyad.
Isbuucyadii la soo dhaafay ayaa Denmark xuduuda ka xiratay Sweden. Norway iyo Finland iyagoo bilaabay in ay baasaboor waydiiyaan dadka u kala safraya labada wadan, arintaan ayaa horey heshiis uga yaalay oo ahaa in aan wax dukuminti ah la waydiin dadka u kala safraya wadamada Iskaandaneefiya.
Lacagtaan isticmaalkeeda bishaan ayaa u dambaysa
Ha hilmaamin in aad bixiso Zakat Al-Fitriga
May 24, 2011 at 13:28
Ninkii Khayrkiisa loo xiiroow , adna soo QOYSO \_\_
Hadda xaaladi waa midaa , runtiina waa sidaa iyo si la mid ah , Sweden waa ay u badanta in Doorashada Soo socota ay SD Noqdaan Xisbiga Koowaad Ee Wadanka taladiisa haaya , ama Labaad , Xaqiiqdiina , waad dareemi kartiin Xisbi hammiinkii koowaad kasoo kor maray ilaa xisbayadii kale ee Sedexaad noqday , marka nin walba isagaa garan sida uu aayahiisa uga tashan , waxaanse SOOMAALI oran lahaa war DalkeenA nabadiisa aan ku dadaalno Kaas ayaa wadankeenii ahe , horaa loo yiri Lamma Huraan waa Cawska Jiilaal
Wiil Somali says:
Abu Xamza Fikradaa aad ayeey u wanaagsan tahey lakiin su’aasheyda waxey tahey dad ka Somaliyeed wadankooda ma rabaan ima bersentej ayaa soomaali wadani ah. sida ey ila tahey waxaan nahey dad Diintooda ka hor mariya Qabiil kooda Dalkooda ka hor mariya danta Shaqsiga ah. Umadna hadii ey iloowdo Taariikhdeeda xaqiiqda waxey tahey iney umaa luntey. waxaan nahey dad ku qanacsan Qaxootinimada iyo ceyda dadka aaan la noolnahey iyo cunsuriyada marka wadada naga horeysana uma maleynayo iftiin Wabilaahi Towfiiq.